Vanomwe vakaurayiwa muKabul airport chaos sezvo ndege dzese dzekutengesa dzakadzimwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Afghanistan Kuputsa Nhau » Vanomwe vakaurayiwa muKabul airport chaos sezvo ndege dzese dzekutengesa dzakadzimwa
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vanomwe vakaurayiwa muKabul airport chaos, sezvo ndege dzese dzekutengesa dzakadzima
Vamwe vevanhu vakaurayiwa vainge vakabatirira ndege yemauto ekuUS payakasimuka, asi vakawira kurufu rwavo vachangosimuka.
Vanoshushikana vagari veAfghan vanokanganisa kubuda kwemauto.
Vamwe vevanhu vakaurayiwa vanga vakabatirira kune imwe ndege yekuAmerica yekufambisa payakasimuka.
Mauto eUS akarwira kudzora ruzhinji rwevanhu husiku, uye mishumo yakauya nepfuti nekutsika.
Vagari vanomwe veAfghan vakaurayiwa paKabul airport mayhem, kusanganisira vamwe vanhu vakadonha kubva kune imwe ndege yekuAmerican yekufambisa, uye ndege dzese kubva muguta guru reAfghan dzakakanganiswa nemapoka munzira, vakuru veUS muKabul mushumo.
Mukati meSvondo manheru ese, mauto eUS akaunzwa kuzodzivirira kuburitswa kwevamiriri veAmerica nevashandi vakanetseka kuchengetedza mhomho dzevaAfghan dzakapererwa kubva pamugwagwa paKabul Hamid Karzai Airport, ikozvino ndiyo chete nzira yekurarama pakati peTaliban-inodzorwa Afuganisitani uye nekunze kwenyika.
Vamwe vevanhu vakaurayiwa vakanamatira ndege yemauto eUS payakasimuka, asi vakawira kurufu rwavo nguva pfupi yapfuura kubva pakukwira kusvika pakufa kwavo.
Ndege dzekutengesa dzakabuda muKabul dzakamiswa neSvondo, asi mapoka evaAfghan anoshushikana akazara mumugwagwa mumwe chete weairport zvisinei, mubvumo yekupedzisira yekubata ndege kubva muguta guru reAfghan.
Mauto eAmerica akatambudzika kuti abvise mapoka acho husiku, uye nhoroondo dzekupfura nepfuti dzakatanga.